NYU, iYunivesithi yaseNew York: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO
IYunivesithi yaseNew York iyunivesithi yangasese ekhethileyo e-Manhattan yaseGreenwich Village. Ngo-2016, i-NYU yayinomyinge wokwamkelwa kwe-32% kuphela. Ukuze ubone indlela olinganisa ngayo, ungasebenzisa esi sixhobo samahhala eCappex ukuba ubale amathuba akho wokungena.
NYU GPA, SAT kunye ne-ACT Graph
NYU, iYunivesithi yaseNew York i-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ngobuninzi beeprogram zezemfundo ezihle kakhulu kunye nendawo enomdla kwiSixeko saseNew York saseGreenwich, iYunivesithi yaseNew York yiyunivesiti ekhethileyo kakhulu ekhupha ukukhutshwa okungaphezulu kunokuba kwamkelekile. Kwidraf yedatha yokwamkelwa apha ngasentla, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka noluhlaza amela abafundi abamkelekileyo. Idatha ibonisa ukuba uninzi lwabafundi abaya kwiYunivesithi yaseNew York banamaGPA angapheliyo ngaphezu kwe-3.3, amanqaku angamalungu angama-25 ngaphezulu, kunye nomlinganiselo we-SAT (RW + M) we-1200 okanye ngaphezulu. Amathuba okungenwa akhangele phambili kubafundi abane-GPAs ezi-3.6 okanye ezingcono, ama-ACT amanqaku angama-27 okanye angcono, kunye nomlinganiselo we-SAT malunga no-1300 okanye ngaphezulu. Ngaphandle kwemibandela embalwa, abafaki zicelo abaphumeleleyo bathambelela ukuba baqine abafundi "A". Ngaphandle kwamanqaku anqambileyo kunye namanqaku okuvavanya, abafaki sicelo abanaso isiqinisekiso sokungeniswa njengolu grafu lweedatha kubafundi abanqatshelweyo kubonisa.
Uya kuphawula ukuba abafundi abambalwa bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku angaphantsi kwesiqhelo. I-NYU ine- admissions ephelele , ngoko ke izikhulu zamagosa ezamkelwayo zivavanya abafundi ngokusekelwe kwidatha yenani. Abafundi abonisa uhlobo oluthile lwe talente ephawulekayo okanye ibali eliphosakeleyo ukulixelela liya kubakho ukujonga ngokukhawuleza ukuba ngaba amanqaku kunye namazinga okuvavanya awanelanga. Kwakhona, ngenxa yokuthi i-NYU idiresi eyahlukeneyo, iyunivesithi yamazwe ngamazwe, abaninzi abafake izicelo bavela kumazwe anamaqela ahlukeneyo amanqaku kunezikolo zase-US.
Iyunivesithi ilungu leSicelo esiQhelileyo , isicelo esisetyenziswa ngokubanzi esinikeza amathuba amaninzi ukuba ukwabelane ngolwazi ngaphandle kobakala bebakala kunye novavanyo lwamanqaku okuvavanya. Incwadi zengcebiso , isicatshulwa soLuntu oluqhelekileyo , kunye nemisebenzi yakho yecandelo elongezelelweyo liya kudlala indima kwinkqubo yokwamkelwa. Abafundi abasebenzisa iSikolo saseSteinhard okanye iTisch School of Arts baya kuba neemfuno ezingaphezulu zobugcisa bokungeniswa. Iyunivesithi ayenzi ngokuqhubekayo nodliwano-ndlebe njengenxalenye yenkqubo yokwamkelwa, nangona abasebenzi abangabamkelwayo bangamema abanye abaviwa ukuba bathethe udliwano-ntle xa beva ukuba incoko iya kubancedisa ekwenzeni isigqibo sokwamkelwa.
IYunivesithi yaseNew York inezinketho ezimbini zeSigqibo sokuQala (ED I ngexesha elidlulileyo likaNovemba, kunye ne-ED II kunye nexesha elidlulileyo loJanuwari 1). Ezi zikhetho zibophelelo, ngoko ke ukuba uyangeniswa ukulindeleke ukuba ube khona. Faka isicelo seSigqibo sokuQala kuphela ukuba u-100% uqinisekile ukuba i-NYU iyona sikolo sakho esikhethiweyo. Kungenzeka ukuba ukusebenzisa iSigqibo Sokuqala kunokuphucula amathuba akho okuvunyelwa ukuba yindlela enamandla yokubonisa umdla wakho kwiyunivesithi.
Ekugqibeleni, njengazo zonke iikholeji ezikhethiweyo, iYunivesithi yaseNew York iya kukhangela ubunzima bekharityhulam yesikolo sakho esiphakamileyo , kungekhona nje kumabakala akho. Impumelelo kwi-AP, i-IB, i-Honors, kunye neCandelo lokuBhalisa kwaBafundi bonke, inokuphucula amathuba akho okuvunyelwa, kuba ezi zifundo zimelela ezinye iziphumo eziphambili zokuphumelela kwikholeji.
Amanqaku afana neYunivesithi yaseNew York
Ukuba ufuna ukufunda okunye malunga ne-NYU kuquka i-50% ye-ACT kunye ne-SAT amanqaku abafundi abavunyelweyo, iindleko, ulwazi lwezezimali, kunye neerhafu zokuphumelela, qi niqiniseke ukuba ukhangele i- NYU profile admissions e. Ukubona ezinye zeesayithi ezikufutshane nekampus, ungahlola ngekhenketho yesithombe se-NYU .
Amandla amaninzi e-NYU athola indawo phakathi kweekholeji eziphezulu zeNew York kunye neikholeji zaseMpumalanga zase-Atlantic .
Ukuba uthanda iYunivesithi yaseNew York, Unako ukuthanda ezi zikolo
Abafundi abasebenzisa i-NYU bahlala bekhangela i-yunivesithi eyimfihlo yabucala kwindawo edolophini. Ezinye zeeyunivesithi ezidumileyo ngabafakizicelo be-NYU ziquka iYunivesithi yaseBoston, iYunivesithi yaseNyakatho-ntshona , iYunivesithi yasePennsylvania kunye neYunivesithi yaseChicago . Qaphela ukuba ezinye zezi zikolo zikhethwa ngaphezu kwe-NYU, ngoko uya kufuna ukuqinisekisa ukuba usebenza kwiindawo ezimbalwa kunye nebhayibhile engezantsi yokunyusa ukunyusa amathuba okufumana iincwadi ezinamkelekileyo zokufumana.
Ukuba ufuna ngokwenene ukuhlala endaweni yaseNew York City, khangela iKyunivesithi yaseColumbia (ekhethileyo kune-NYU) neYunivesithi yaseForhamham (ongakhethekanga ngaphezu kwe-NYU).
Idatha yeYunivesithi yaseNew York yokuBala abaFundiweyo
I-University of New York GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO oQhathaniswa nabaFundi abaFuthiweyo. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Kulo grafu ngasentla, ndithathile ulwazi lwe-Cappex lwamkelwa kwaye ndisusa onke amanqaku eenkcukacha kubafundi abamkelweyo ukuba bangashiyi nto ngaphandle kwamachaphazi abomvu abamele abafundi abachasiweyo. Eli grafu ibonisa indlela eyunivesithi ekhethiweyo ngayo: Abafundi abaninzi abaneSAT ezinamandla kunye ne-ACT izikolo kunye ne "A" imilinganiselo esikolweni esiphakamileyo banqatshelwe.
Nangona ungumviwa oqinileyo we-NYU, akufanele ucinge ukuba isikolo sokhuseleko , kwaye unokuba usilumko ukucinga ukuba kufinyeleleka nokuba ngaba amanqaku akho kunye nezikolo zokuvavanya zijoliswe kuzo.
Jonga i- NYU Profile ukuze ufunde kabanzi malunga neyunivesithi ephakamileyo yasezidolophini.
I-Stetson University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Benedictine College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
I-Ramapo College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
"Iintsuku Zethu Zokuphila" Uludwe Lwezithuba
O.Henry's 'Two Daygiving Day Gentlemen'
Yiyiphi iMigangatho yokuBhengeza ibhola engadlalayo?
Imbali yeeTranscars - Iikhamera zeChethane
UDaniel Uhlawulela, uMhlaba weZero Master Planner